भारतमा विध्वंश मच्चाउँदै सलह किरा : नेपाल छिर्ने सम्भावना कति ? भिडियो रिपोर्ट | शुभयुग
भारतमा विध्वंश मच्चाउँदै सलह किरा : नेपाल छिर्ने सम्भावना कति ? भिडियो रिपोर्ट
१८ जेठ काठमाण्डौ – कोरोना भाइरस र फौजी किराको चपेटामा परेका किसानलाई अर्को प्रकोपले चिन्ता थपिदिएको छ ।
बालीमा फौजी किराभन्दा धेरै नोक्सानी पुर्याउने सलह किरा नेपाल प्रवेश गरे कसरी नियन्त्रण गर्ने र बालीलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे किसानहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । सँगै कृषि र कीट विज्ञहरु सोचमग्न भएका छन् ।
अफ्रिकी देशहरु केन्या, सोमालिया, तान्जानिया, युगान्डा र दक्षिणी सुडान हुँदै सलह किराहरुको फौज इरान र पाकिस्तान पुगे । पछिल्लो समय भारतमा उधुम मच्चाउँदैछ।
यसअघि सलह किरा भारतको राजस्थानसम्म मात्र देखिएपनि यसपालि भारतका पन्जाब, महाराष्ट्र र दिल्लीलगायत प्रान्तसम्म आइसकेका छन् ।
४ करोडदेखि ८ करोडको झुन्ड :
तर नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास भएको छैन । सलह देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोग लिने सरकारको तयारी छ । वरिष्ठ विज्ञ डाक्टर अर्यालका अनुसार यो किराले ठूलो आवाज रुचाउँदैन । सबैभन्दा पहिले यो किरा प्रवेश गरेको नगरेकोबारे किसान चनाखो हुनुपर्छ । यो किरा प्रवेश गरे यसलाई ठूलो आवाजमा स्पिकर बजाएर धपाउन सकिन्छ । विज्ञ अर्यालका अनुसार खेतबारीमा थाल ठट्टाएर पनि यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
यस्तै, यो किरालाई चराले खाने भएकाले खेतबारीको छेउछाउ र बीच भागमा चराका लागि बासस्थानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बाँसको टोड्को बनाएर चराको बासस्थान बनाए चराले यी किरालाई खाइदिन्छ ।
यति गर्दा गर्दै पनि किरा नियन्त्रण गर्न नसकिए रसायनिक विषादी छर्नुपर्छ । तर बालीनालीमा देखिने फौजी र अरु किरालाई जसरी विषादी छर्किने सम्भावना नहुने हुँदा पानीको गाडीलाई छेउमा राखेर स–साना पानीको थोपा फाल्ने मेसिनमार्फत विषादी छर्कनुपर्छ ।
नेपालमा सलह किरा प्रवेश गर्ने जोखिम बढेपछि रोकथामका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरेर अध्ययन थालेको छ ।
सलह किरा के हो र यसले बालीनालीमा कसरी असर गर्छ भन्ने जानकारीसहितका सामग्री किसानसम्म पुर्याउने सरकारको तयारी छ । विज्ञका अनुसार सलह किराको रोकथामका लागि मुख्य उपाय भनेको बालीनालीको अनुगमन र यो किरा कुन दिशामा उडिरहेको छ भन्ने कुरा नै हो ।
आतङ्कित नभईकन यसको रोकथामका उपायबारे पूर्व तयारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको हावापानीमा सलह किराले फुल पार्ने सम्भावना नरहेकाले यसको झुन्डमा केन्द्रित भएर रोकथामका उपाय अपनाइने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । उज्यालो अनलाईनवाट साभार